GoWikipedia - Lacag
Hadaba dunida maanta waxaa jira tiro badan oo lacag ah, wadan kasta wuxuu leeyahay beeso u gaar ah, taasi oo qiimaheedu kala sareeyo isla markaana ka sameeysan shilimaan iyo warqado. Guud ahaan beesadu waa labo nooc: mid shilin ah iyo mid warqad ka sameeysan. Shilimaantu waa qadarka ugu qiimaha hooseeya lacagta wadan leeyahay, inta badana waxa ka soo bilaabmaan hal senti, shan senti, toban senti, konton senti iyo boqol senti. Boqolka senti wixii ka sareeya waxaa la isticmaalaa warqad taas oo ka bilaabanta kow ilaa malaayiin. Laakiin inta badan, lacagta dunida waxaa ugu sareeysa warqad shan kun ah.
=Qiimaha Beesada=100 shilin
IQD : Ciraaqi Diinaar : Ciraaq
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Lacag&oldid=186486"